Main maitikiro azvino maitiro muSpain | Zvazvino Zvinyorwa
Main maitikiro azvino uno maitiro muSpain
Carmen Guillen | | Type, Novela
Kunyangwe iyo novel yakashanduka nekufamba kwenguva sezvakaita mamwe mavara emhando dzakadai senhetembo nemitambo yemitambo, iyo novelistic maitiro yekota yekupedzisira yezana ramakore makumi maviri, iyo yakatora zvinyorwa zvenguva pfupi.
Kunyangwe nhasi zvisiri nyore kuona zvekugadzira mafashama kana zvikoro murondedzero nyowani, isu tinogona panzvimbo pekuti tione mashoma makuru ezvino kuitika muSpain. Tinogona kutaura pamusoro pezvimwe zvishanu zvinoenderana tobva tazvitumidza mazita uye tinoita pfupiso nezveumwe neumwe wavo.
1 Chakavanzika uye / kana zano rekufungidzira
2 Nhoroondo yenhoroondo
3 Yepedyo yekufungidzira inoverengeka
4 Novel yezviyeuchidzo uye zvipupuriro
5 Yerudo uye eroottinen inoverengeka
Chakavanzika uye / kana zano rekufungidzira
Iyo sainzi fikisheni genre uko kunyongana uye nyaya dzemapurisa dzinoitwa nekumutswazve mukupedzisira 90s muSpain. Pakati pevarimi vayo venyika tinogona kuratidza Manuel Vazquez Montalban ndiani akasika mutikitivha wega Pepe Carvalho; Zvakare ku Perez-Reverte nemanoveli ake makuru senge "Mambokadzi weSouth" rakabudiswa muna 2002 kana rimwe remabasa ake akakurumbira apfuura, «Tafura yeFlanders» (1990) uye «The Dumas Club» (1992).
Kana tichienda kuma90 isu tinofanirwa kuratidza mabasa senge "Ndarama yezviroto" de Jose Maria Merino, "Mupanduki", rakaburitswa muna 1998 naMiguel Delibes kana saga inozivikanwa ine nyeredzi Captain Alatriste yakaiswa muSpanish Golden Age, nemunyori ambotaurwa, Arturo Perez-Reverte.
Uye mumakore achangopfuura, mhando yenyaya yenhoroondo yakave yakabudirira ndeiya yakagadziriswa mune dziri pedyo nguva senge yeVanhu Hondo. Kana tikataura nezve ino nguva isu tinogona kutaura akadaro akasarudzika mabasa se "Izwi rakarara" (2002) kubva Yakanaka Chacon, "Varwi veSaramisi" (2001) kubva Javier Fences o «Zita redu» (2004), kubva Lawrence Silva. Iyo yekupedzisira inotaura nezvehondo muAfrica muma20s.
Yepedyo yekufungidzira inoverengeka
Aya maanoveli anoonekwa pamusoro pezvese nekutsvaga kwega uye kuratidzira kwechimiro pahupenyu hwavo uye hupenyu.
Kune vanyori vazhinji vakazvipira muviri nemweya kune rudzi urwu rwemhando: Juan Jose Millás nebhuku rake "Iko kusagadzikana kwezita rako", umo kufungidzira kwepfungwa kunosanganiswa nekuratidzira kunyorwa; Julio Llamazares, nebhuku rake "Mvura yero" (1988) uko chimwe chinhu icho chichiitika nanhasi chinotaurwa, sekuenderera mberi kwekusiiwa kwevanhu.
Novel yezviyeuchidzo uye zvipupuriro
Ndangariro yechizvarwa uye kuzvipira ndiwo madingindira ekutanga eiyi maitiro mune vanyori vakaita se Rose Montero maari anodzivirira mamiriro echikadzi mubhuku rake "Ndichakubata semambokadzi" (gumi nemapfumbamwe nemakumi masere nerimwe). Inosimbisawo Luis Mateo Diezne "Kwabva zera" (1994) maanogadzira zvinyorwa uye zvinosetsa zvehupenyu hwedunhu.
Yerudo uye eroottinen inoverengeka
MuSpain, zera regoridhe rerudo rwakararama mukati mezana ramakore rechiXNUMX. Parizvino pane vanyori vanosanganisa kudanana uye eroticism mumanovels ane vakawanda vakadzi uye vadiki vateereri. Isu tinogona kutaura mune ino maitiro eino nyowani genre kusvika Elisabet Benavent, iyo yakave inozivikanwa zvikuru nekutenda kune yayo Saga yaValeria uye iro gore mushure megore anga achishambadza anoshanda ane akafanana maitiro seakatanga.
Uye iwe, ndeapi eaya maitiro kana mhando dzemanyowani aunonyanya kuverenga? Iwe ungatiudza here iro bhuku raunofarira kubva kune imwe yeaya maitiro anotaurwa pano?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Main maitikiro azvino uno maitiro muSpain